Home Myanmar iFocus မြန်မာ, စျေးနှုန်း, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်, အသံုးျပဳနည္း - မ်က္လုံးႂကြက္သားအေထာက္အပံ့
iFocus တကယ့္ရလဒ္အစစ္, ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ပံု, ဖိုရမ်, အကျိုးကျေးဇူးများ, ကိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
iFocus ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ပံု, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်, ကိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှု, အဘယ်မှာဝယ်ပါရန်, မြန်မာ
iFocus ဆေးတိုက် စြေး, တကယ့္ရလဒ္အစစ္, မြန်မာ, အကျိုးကျေးဇူးများ, အဘယ်မှာဝယ်ပါရန်, ဖိုရမ်
လူတစ် ဦး ၏အရေးအကြီးဆုံးနှင့်အလှဆုံးခံစားချက်တစ်ခုမှာအမြင်ဖြစ်သည်။ မျက်စိသည်လူတစ် ဦး အားသတင်းအချက်အလက်အများဆုံးပေးပြီးပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုရန်ကူညီသည့်အာရုံခံအင်္ဂါဖြစ်သည်။ မျက်စိ၏တောက်ပ။ ကြည်လင်သောအသွင်အပြင်ကိုအာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းသည်အချို့သောအာဟာရများမရှိခြင်းနှင့်အတူပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လူအများစုကအလင်းရောင်မကောင်းသောအချိန်တွင်၊ ညအချိန်တွင်ကားမောင်းနေစဉ်သို့မဟုတ်ဥပမာအပ်ထိုးသွင်းလိုသည့်အခါစာဖတ်သောအခါဤအရာကိုခံစားကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများငြီးငွေ့လာပြီးသို့မဟုတ်ရေစိုလာသည်အထိကျွန်ုပ်တို့မစောင့်သင့်ပါ။ မျက်စိကိုအဆက်မပြတ်ဂရုစိုက်ရန်လိုသည်။
iFocus သည် မြန်မာ တွင် မကြာသေးမီကစတင်မိတ်ဆက် သောဆန်းသစ်သောအမြင်အာရုံအထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်သည်။ဤဆေးတောင့်များ၏အကူအညီဖြင့်သင်၏မျက်စိကိုပြုပြင်နိုင်ပြီးမျက်မှန်များနှင့်အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးများကိုတစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ်မေ့ပစ်နိုင်သည်။ အကယ်. သင် ဘာကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည် ဖြစ်ပါသည် iFocus, ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ် ဘယ်လိုသုံး ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်နှင့် အဘယ်မှာဝယ်ပါရန် ထိုအကာဆွဲဆောင်မှုမှာမျက်စိထုတ်ကုန်များမှာ စျေးနှုန်း ကောင်းသော တကယ့္ရလဒ္အစစ္ နှင့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက် နှင့်အတူ) ဖတ်ပြီးသား, ဤဆောင်ပါး။
အမြင်အာရုံချို့ယွင်းမှုအားအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသောအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြောင်းလဲမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အချို့မှာရောဂါဗေဒဖြစ်စဉ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ခံ၊ ကွန်ပျူတာတွင်လူတစ် ဦး ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိနေခြင်း၊ သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းစသည်တို့တွင်ထင်ရှားသည်။ အမြင်အာရုံကိုချက်ချင်းပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကတိပေးသည့်ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များစွာသည်ယနေ့တွင်ရှိသည်။ သို့သော်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဤမျှလောက်များစွာသောလုံးဝသဘာဝအဆေးတစ်လက်အကြံပြုသာရေတိုရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန် iFocus လက္ခဏာများ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုနှိုးဆျောသောအကြောင်းပြချက်များသာဖျက်သိမ်းရေး, သိသိသာသာအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွက်အမြင်အာရုံ ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သော။
သဘာဝအားဖြင့်အမြင်အာရုံပြောင်းလဲခြင်းသည်အသက်အရွယ်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အမြင်အာရုံပိုဆိုးလာသည်အထိ၊ သင့်မျက်လုံးများသည်ပင်ပန်းလာသည်သို့မဟုတ်ရေစိုလာသည်အထိစောင့်စရာမလိုတော့ပေ။ အမြင်အာရုံချို့ယွင်းမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးလက္ခဏာများမှာမျက်လုံးကိုပင်ပန်းစေခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ထို့နောက်စာဖတ်နေစဉ်အထူးသဖြင့်ညနေခင်းတွင်စာလုံးများပေါင်းစည်းနေသည့်အချိန်တွင်အမြင်အာရုံယိုယွင်းနေသည့်လက္ခဏာများကိုတွေ့နိုင်သည်။ အရာဝတ္ထုများကိုအဝေးမှခွဲထုတ်ရန်ခက်ခဲသည်၊ ၎င်းတို့သည်သူတို့ထက်အမှန်တကယ်ထက်ပိုကြီးသည်ဖြစ်စေသေးငယ်ပုံရသည်။ များသောအားဖြင့်လူတို့ကစာများဖတ်နေစဉ်တွင်သူတို့သည်“ ခုန်” ခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏မျက်လုံးရှေ့မှောက်၌အစက်အပြောက်များဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့်သူတို့၏အမြင်အာရုံသည်ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်ဟုတိုင်တန်းကြသည်။
သငျသညျအမြင်အာရုံချို့ယွင်း၏ပထမဦးဆုံးအရိပ်လက္ခဏာသတိထားမိလြှငျ, မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးဆေးတောင့်သင်တန်းကိုစတင်အကြံပြု iFocus ။
အရာဝတ္ထုများကို အနီးအဝေးမှ မမြင်နိုင်ပါ။စာအုပ်ဖတ်ပါ၊ ချုပ်၊ ရေးပါ၊ ဖုန်းကြည့်ပါ။
သငျသညျအထဲကလုပ်မပေးနိုငျ တဲ့ထံမှတ္ထု ရှည်သောအကွာအဝေး – ဎ စျေးဆိုင်များ၏အမည်များ နှင့်လမ်းများ, ဘတ်စ်ကားအရေအတွက်, ကားများ။
ဆွေမျိုးများ၊ သူငယ်ချင်းများ၏မျက်နှာများကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင်ပါ။ သင်မနှုတ်ဆက်သောကြောင့်သင်သည်လူတို့အားမရိုမသေပြုပုံရသည်။
ပစ္စည်းများစွာသည်မှုန်ဝါးလာပြီးမှုန်ဝါးလာသည်။ လူအုပ်ကြီးထဲမှလူတစ် ဦး ၏မျက်နှာကိုသင်မမြင်နိုင်ပါ။
မျက်လုံးနှင့်fယာများတွင်နာကျင်မှုခံစားရသည်၊ မျက်လုံးများမှယင်ကောင်များ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ နွေးနွေးထွေးထွေးခြင်း၊ သဲများနှင့်မျက်လုံးများတွင်လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ မျက်စိ၏ခြောက်သွေ့ခြင်းများကိုတွေ့ရသည်။
စာဖတ်သူအများကြီးဖတ်ပြီးကားမောင်းတာ၊ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတိုင်းအတွက် iFocus အကြံပြုထားပါတယ်။ တောင့ iFocus ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်မရွေးလူများအတွက်သင့်လျော်သောအဖြစ်အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးသို့မဟုတ်မျက်မှန်ဝတ်ဆင်သောသူတို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ မတူကွဲပြား။ မျှတသောအစားအစာနှင့်ကျန်းမာသောဘဝပုံစံကိုလည်းအရေးကြီးသည်။
iFocus မင်း ကိုအသုံးပြုခြင်း :
သိပ္ပံပညာရှင်များသည် 8 နှစ်ကြာအောင် ထူးခြားတဲ့ဖြည့်စွက်ကို iFocus ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်အဆင့်များစွာစမ်းသပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးလိုင်စင်နှင့်အရည်အသွေးလက်မှတ်များအပြင်ပြည်တွင်းဆုများစွာကိုရရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးသုံးကိရိယာတစ်ခု၏အမြန်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခု၊ အသုံးပြုမှုနောက်တစ်ကြိမ်သင်သိသောမှတ်သားခြင်း။
အဆိုပါဖော်မြူလာ ဇာတိ စက်ရုံထုတ်ယူမှု အပေါ်အခြေခံပြီး, ဒါကြောင့်ဆရာဝန်တစ် ဦး ၏ဆေးညွှန်းမပါဘဲထုတ်ပေးသည်။ iFocus ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေ ဖြင့်သက်သေပြထားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများသာပါဝင်သည်။
ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာတက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းများ iFocus ကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်မထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပြင်ပမှအစားအစာများနှင့်ဖြစ်စေ၊ အဆိုပါ lutein, zeaxanthin, vitamins, C, E နှင့် ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း iFocus မျက်စိများ၏တစ်ရှူးအတွက် ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များ, အလှာထဲမှာအသက်အရွယ်-ဆက်စပ်ပြောင်းလဲမှုများအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရူပါရုံသည်လှာ၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောအဝါရောင်အစက် – အပြောက်၏သိပ်သည်းမှုအတိုင်းအတာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အပင်(lutein နှင့် zeaxanthin) တို့သည်တွင်စုဆောင်းပြီးကမ္ဘာ၏ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၏ဆိုးကျိုးများကိုတားဆီးသည်။ ၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောဓါတ်တိုးပစ္စည်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်းသည်မျက်စိ၏တစ်သျှူးများကိုပျက်စီးစေပြီးအမြင်အာရုံကိုလျော့နည်းစေသည့်အခမဲ့အစွန်းရောက်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ ဗီတာမင် စီ နှင့်အီးသည်အများအားဖြင့်တစ်ရှုး၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးဖြည့်စွက်ပေးသောအသုံးအများဆုံး များဖြစ်ပြီးမျက်စိတစ်သျှူးကိုပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ သူတို့ဟာပုံမှန်အလင်းတာဝန်ရှိသည်, ချောင်းတွေနဲ့တစ်မျိုးကတော့များ၏ (စသည်တို့ကို) အမြင်အာရုံဆိုးဆေး၏ပွနျလညျထူထောငျဖို့အထောက်အကူ – ဏ နှင့် အရောင်အမြင်။သူတို့ကနံရံတွေကိုအားဖြည့်ပေးပြီး သင်္ဘောတွေအပါအဝင်သွေးကြောတွေရဲ့ ကိုတိုးမြှင့်ပေးတယ်။ တစ်သျှူးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့်ဆဲလ်ဇီဝြဖစ်၏အခြားဖြစ်စဉ်များတွင်ပါဝင်ရန်။ သူတို့က ရှိတယ်။ သူတို့သည်မျက်လုံးကြွက်သားများနှင့်အရွတ်များကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ C သည် ၏အာဟာရကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်အာရုံကြောအာရုံကြောများ၏လည်ပတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ ထိုသဲလွန်စများလုံလောက်စွာမသုံးစွဲခြင်းသည်အမြင်အာရုံချို့ယွင်းမှု၊ မျက်စိမျက်စိကျဆင်းခြင်းနှင့်မျက်ခုံးအရောင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။
လှုပ်ရှားမှု iFocus :
၎င်းသည်သက်ရှိတစ်ခုလုံး၏အခြေအနေအပေါ်တွင်အားကောင်းသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုလှုံ့ဆော်သည်။
ဓာတ်ပုံပျက်စီးခြင်း မှမြင်လွှာအားယုံကြည်စိတ်ချရသောကာကွယ်မှုပေးသည် ။
မျက်စိအတွင်းတိမ်နှင့်မျက်နှာပြင် ပေါ်ရှိအစက်အပြောက်များ ကဲ့သို့သောပြofနာများ ဖြစ်ပွားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းများ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရုပ်ပုံများ၏ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်တောက်ပမှုသည်လူတစ် ဦး ထံသို့ပြန်လာပြီးပြင်ပအချက်များ၏ဆိုးကျိုးများကိုမခံစားနိုင်တော့ပါ။
ဆဲလ်အဆင့်မှာဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်များကိုပြန်လည်မျက်စိ s လျှော့ချကူညီပေးသည်။
အမြင်အာရုံပြာများသည်မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆိုဖြစ်ပွားတတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုမကြာခဏအံ့အားသင့်စေတတ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ယေဘူယျအခြေအနေ သို့မဟုတ်သုခချမ်းသာ နှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အထများနှင့်အပန်းဖြေမှုများပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ မျက်လုံးပျက်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်အမြင်အာရုံကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်ပြုတ်ကျလာသည်ကိုသင်သတိပြုမိပါက သဘာဝဟင်းသီးဟင်းရွက်များပေါ်တွင်အခြေခံသည့်အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည့် ထုတ်ကုန်မျိုးဆက်သစ် iFocus ကို ကူညီလိမ့်မည် ။
အကျိုးကျေးဇူးများ iFocus :
မတည့်တုံ့ပြန်မှု, ကျိန်းစပ်သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းမရှိ, သုံးစွဲဖို့လုံးဝလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ၏သီးသန့်ဘူးပါဝင်သည် ကိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှု။
တစ်ခုတည်းသောသည်တစ် ဦး ချင်းစီကိုသည်းမခံခြင်းဖြစ်သည်။
လျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများယိုယွင်းခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းကိုဖယ်ထုတ်ပြီး၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်စနစ်အားလုံး၏လုပ်ငန်းကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။
လူတစ် ဦး ၏အသက်အရွယ်မခွဲခြားဘဲအလုပ်လုပ်သည်။
iFocus ရူပါရုံကိုပုံမှန်, မျက်စိထဲမှာအီဖယ်ရှားပစ်ရရန်ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင်ဤကိရိယာသည် ကဲ့သို့သောရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။
အဆက်မပြတ်မျက်စိ, အသက်, သင့်လျော်သောအိပ်စက်ခြင်းမရှိခြင်း, မလျော်ကန်သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ – ဒါကအမြင်အာရုံချို့ယွင်းစေသည့်အကြောင်းရင်းများအနည်းငယ်ပဲ။ စည်းကမ်းအနေဖြင့်အစတွင်၎င်းတို့သည်အနီရောင်၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ မျက်လုံးရှေ့တွင်အနက်ရောင်အစက်များ၏ပုံပန်းသဏ္,ာန်၊ အကြောင်းအရာအားချက်ချင်းမမြင်နိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်ထင်ရှားစေသည် (များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ပုံသဏ္lာန်ကျပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှသာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်)။အကယ်၍ ထိရောက်သောအစီအမံများကိုအချိန်မီမပြုလုပ်ပါကဤပြပိုမိုားလာပြီးအန္တရာယ်ရှိသောမျက်စိရောဂါရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
iFocus – ဤအရာများသည်မည်သည့်အသက်အရွယ်တွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည့်အမြင်အာရုံကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်အားလုံးသောသဘာဝဆေးတောင့်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်မသန်စွမ်းမှုပုံသဏ္ာန်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းများကိုမည်သို့ပင်ဖြစ်စေအလုပ်လုပ်ကြသည်။
၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ရေနည်းနည်းဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၁- စုပ်စုတ်သောက်ရုံသာဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကို အမြင် နှင့် ပတ်သက်. iFocus?
ဆေး၏အဓိက အားသာချက် တစ်ခုမှာ ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ၎င်းသည်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်လုပ်နိုင်သောကြောင့်သင်တန်းစတင်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပထမဆုံးအပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒါဟာအိမ်မှာအမြင်အာရုံတိုးတက်စေရန်အမှန်တကယ်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, စျေးကြီးဒြပ်ပစ္စည်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှအစားထိုး။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ နှင့်အကြောင်းကို iFocus ဖိုရမ် ရက်နေ့မှာဖြစ်ကြ အပြုသဘောဆောင်။ ထို့အပြင်, ထုတ်ကုန် ဦး ဆောင်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အထူးကုများအကြားသူ့ဟာသူတည်ထောင်ခဲ့သည် တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများ iFocus အမြင်အာရုံတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့မှုကိုသက်သာစေခြင်းနှင့်ဝန်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။ သူတို့သည်အူတွင်းထဲရှိဖိအားကိုတည်ငြိမ်စေသည်၊ သွေးကြောများနှင့်ဆံချည်မျှင်သွေးကြောများကိုအားဖြည့်ပေးပြီး၎င်းတို့အားပိတ်ဆို့မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ဒီကိရိယာက ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာကာကွယ်ပေးတယ်။, မျက်စိအတွင်းတိမ်၊ မျက်စိ၏ချွဲအမြှေးပါးရောင်ခြင်း၊ အစာအိမ်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးခြင်း၊ နှင့် များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ မျက်လုံး၏အလင်းအာရုံခံမှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ မျက်စိကြွက်သားများကိုနှေးကွေးစေပြီးကွန်ပျူတာကိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်၌ပင်လျှင်မြန်စွာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေသည်။
ပကတိနှင့်ပုံဆောင်သဘောအရအရေးမကြီးသောအမြင်သည်ဘဝ၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကျဉ်းမြောင်းစေသည်။ သို့သော်ဤသည်ကို နှင့်အိမ်မှာနိုင်ပါတယ်။ လတ်တလောဆေးတောင့်များ ဆေးတိုက် စြေး iFocus သည်အမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေပြီးရောဂါများစွာကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းတို့သည်မျက်စိရောဂါများကိုကုသရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်အတွက် သုံး၍ အဆင်မပြေမှုများစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သင်၏မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်သည်အပြုသဘောလမ်းကြောင်းကိုအတည်ပြုရန်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ မျက်မှန်များနှင့်မှန်ဘီလူးများသည်မကြာမီမလိုအပ်သောအရာဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့မရှိသည့်ပုံသည်တတ်နိုင်သမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
နယူး iFocus အကြီးအအလားအလာရှိပါတယ်။ ယင်း၏အကူအညီဖြင့်သင်သည်သင်၏ဘဝကိုသိသိသာသာပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသည်အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်သည် –
ရူပါရုံကိုတိုးတက်လာဖို့တောင့သုံးပြီးနောက်ထပ်ရှုထောင့် iFocus ဖြစ်ပါသည် အဆင်းလှသောလိင်ကိုနှစ်သက်ဖို့သေချာပါ။ ကုသမှုသင်တန်းပြီးနောက်, ရန်လိုအပ်ခြင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မည်။
အကယ်. သင်က, အခြားသူများကဲ့သို့ဘယ်မှာအတွက်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ် ဝယ်ဖို့ iFocus, ထို့နောက်အဖြေကိုရိုးရှင်းပါသည်။ ဤထုတ်ကုန်ကိုဆေးဆိုင်တွင်မ ၀ ယ်နိုင်ပါ။မြန်မာ ရှိ ထုတ်လုပ်သူ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သာမှာယူနိုင်သည်။ဆိုက်တွင်ကြိုတင်မှာယူခြင်း၏အားသာချက်မှာသင်မူလ တန်ဖိုး iFocus ရ ရှိနိုင်ရုံသာမက စျေးနှုန်း လည်း လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။ မြှင့်တင်ခြင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, သငျသညျအမိန့်နိုင်ပါတယ် iFocus တစ်ဦးလျှော့မှာ ဈေးနှုန်း ။
Previous articleLipo Cold Türkiye yorum, kullanımı, fiyatı: yalnızca 1 kür uygulayarak selülitten kurtulun
Next articleKeto Guru မြန်မာ, စျေးနှုန်း, အသံုးျပဳနည္း, တကယ့္ရလဒ္အစစ္ – ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ